စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၄ ) ( မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး MPT ) | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
Think Different » စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၄ ) ( မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး MPT )	28
ဒါနှင့်ပဲ အဲဒီနေ့မှာတင် မြန်မာငွေ တစ်သိန်း နှင့် FEC တစ်ရာကျော် ထပ်ဖြည့်လိုက်တယ် ။
အရင်တုန်းက ထည့်ထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေ ဒီဘက် Prepaid စံနစ် ထဲကို ပါမလာဘူးတဲ့ ။
အဲဒါနှင့်ပဲ ၊ အဘလည်း Prepaid Top Up Card ဝယ်ပြီး ပိုက်ဆံထပ်ဖြည့် သုံးနေရတယ် ။
” Top up စနစ်ပြောင်းလိုက်တဲ့ ဖုန်းတွေ အရင် တုန်းက ကျန်ခဲ့ တဲ့ ငွေတွေ အတွက် ၊
ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်း သွားပြီး စာတင်ရတယ် ၊ ၁ သိန်းကျော်ရင် ငွေသားထုတ်လို့ ရတယ် ၊
၁ သိန်းအောက်ဆို Top up ထဲ ထည့်ပေးတယ် ၊ ချက်ချင်းတော့ မထည့်ပေးဘူး ၊
ငွေသားထုတ်လို့ ရတဲ့လူလည်း ချက်ချင်းထုတ်လို့ မရသေးဘူး ၊ စာတင်ထားရတယ် “
ရန်ကုန် အိမ်မှာက ၊ အဘ အဖေ ၊ အမေ ၊ အိုကြီးအိုမ နှစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တာလေ ၊
အဘ ဖုန်းရဲ့ ပိုင်ရှင်က အဘကိုယ်တိုင် လေ ၊ သြဇီက ပြန်လာပေးရမလို ဖြစ်နေပြီ ။
မင်းတို့ ဒုက္ခရောက်ပြီး လာမေးမှ ၊ ငါ ဆရာကြီး ရှင်းပြမယ် ဆိုတဲ့ အချိုးလား ။
” ဆက်သွယ်ရေး ၊ စာတိုက် နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်း ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ပညာသင်နှစ်၌ ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်သူများအား ဆုချီးမြှင့်ခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခြင်း “
ဆိုတဲ့ ပြည်သူပြည်သားတွေ / သူ့ Service ကို သုံးစွဲနေတဲ့ Customer တွေအတွက် ဘာမှ အကျိုးမရှိ တဲ့ ၊ အရေမရ အဖတ်မရ တဲ့ ၊ သူ့ ဝန်ကြီး Activity ကို ကြွားတဲ့သတင်းပဲ ဖားပြီး တင်ထားတာကို တွေ့ရတယ် ။
သူများနိုင်ငံမှာ ရှင်းရှင်း လွယ်လွယ်လေး ၊ လမ်းဘေး ကွမ်းယာဆိုင်မှာ SIM card ဝယ်ပြီး ၊
Foreign Resident has written 129 post in this blog.
ဇောက် ထိုး says: ဒီလိုတွေဖြစ်ရခြင်း အကြောင်းရင်းကား… ၂=မျိုးထဲသာ ရှိသည်ဟု ယူဆပါသည်။
htoosan says: ဘဖောက အစိုးရနဲ့ ပါတ်သက်လာရင် basic rule မလိုက်နာတာကိုး .. .. ရစရာရှိရင် အမြန်ယူ၊ ပေးစရာရှိ နောက်ဆုံးမှ ပေး ဆိုတာကို ။ :grin:
ကြောင်လေး says: နဲနဲလေးပြောတာမလောက်လို့………….
AKKO says: အဘဖောရေ ကျွန်တော့်ဖုန်းလည်း card ပြောင်းမလားမေးကတည်းက No ချည်းဖြေလာတာ အခုထိပါပဲ ။ ဖုန်းခကို ကိုထူးဆန်းပြောသလို နည်းနည်းလေးပဲသွင်းထားပြီး ပေကပ်ပြီးနေတာ ။ ဒီလနောက်ဆုံးပြောင်းရတော့မယ်ဆိုတာတောင် ကိုထူးဆန်းစာဖတ်မိမှသိတာ ။
Gipsy says: မဖြစ်မနေမို့သာ သုံးနေကြရတာ … စိတ်ကုန်ပါတယ် အဘရာ…
the best says: ဆက်သွယ်ရေး ၊ စာတိုက် နှင့် ကြေးနန်း ဝန်ကြီး ဦးသိန်းထွန်းရဲ့ လွှတ်တော်မှာဖြေတဲ့ အဖြေကိုက
မောင်ပေ says: ကြုံတုန်း ဦးဘောစိ ပိုစ့်မှာ ဝင်ညည်းဦးမှ
minnannawar says: မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးဖုန်းကိစ္စပြောရရင် ကုန်နိုင်ဘွယ်မထင်။
amatmin says: အဘရေ..
FEC သို့ ဒေါ်လာငွေနှင့်တော့ လုံးဝမရောင်းချပေးပါကြောင်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 368
the best says: ဒီလို FEC ၁၀ တန် နဲ့၂၀ တန်ကဒ်တွေ ကို FEC (သို)့ ဒေါ်လာငွေနဲ့လုံးဝမရောင်းပဲ
shwe kyi says: အားလုံးကိုရှုပ်နေတာပါပဲ။ သူတို့နဲ့ပတ်သက်မိသမျှဟာ ရှုပ်ရှက်ခပ်နေတာပါပဲ။
ဋ္ဌာနတိုင်းမှာသူတို့ပိုင်နက်ထဲရောက်သွားလို့ကတော့ သေပြီဆရာပဲအော်လည်းခံဟောက်လည်းခံ။ အလုပ်အရမ်းများတဲ့သူတို့အားတဲ့အထိမျက်နှာသေလေးနဲ့စောင့်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 923
mamanoyar says: ဖုန်းသုံးတဲ့လူတွေလဲ အခက်အခဲတွေရှိကြတာအမှန်ပါပဲ
shwe kyi says: မမနိုရာရေ မနိုင်ဝန်ထမ်းနေရတယ်ဆိုတာမျိုးလားမသိနော်။ မနိုင်ရင်လည်းဖြည်းဖြည်းပဲသွားရအောင်နော်။ စကားကြီးစကားကျယ်တွေမပြောပဲမလုပ်နိုင်ရင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိသင့်တယ်။
ပြည်သူတွေကသည်းခံနိုင်ပါတယ်။ :D ချို့ယွင်းချက်နည်းနိုင်သမျှနည်းတာကောင်းမယ်ထင်တယ်နော်။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3097
Foreign Resident says: ” သူတို့လို မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါဘူး ”
myanmarcitizen says: Internet လိုင်းကမကောင်းဘူး။ ဖုန်းကလဲ အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံ ဖြစ်နေတယ်။ ဆက်သွယ်ရေးက စာရေးမကအချိုးမပြေဘူး။ (1000 တန်တွေကို 10000 စီခေါက်ပြီး 100000 စည်းထားလို့ တစ်ခါ အဟောက်ခံရဘူးတယ်) အဲ့တော့ ၀န်ကြီးကိုမပြောလို့ ဟိုး .. ရွာမှာလယ်ထွန်နေတဲ့ အဖိုးကိုသွားပြောရမှာလားဗျာ။
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 520
captainamerica says: ဆိုင်တွေနဲ.လဲပေါင်းရိုက်တတ်သေးတယ် အဘရဲ.ကျွန်တော်ဖုန်းပျောက်တာအဲဒီဆက်သွယ်ရေး
၁၅ သိန်းတုန်းကလည်း မှည့်ရွဲ.နေအောင်ခံစားရပီးသွားဘီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1687
char too lan says: ဘူလား ?
ဖိုးထောင် says: အင်း ဖုန်းရှိခြင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကလည်း မသေးပါလားနော် မသုံးလို့ကလည်းမဖြစ် သုံးပြန်တော့လည်း စိတ်ညစ် အင်း. မစဉ်းစားတော့ပါဘူး ထန်းရည်သွားသောက်တာပဲကောင်းပါတယ်
myanmarcitizen says: 1. ခုချိန်ထိတော့ သူ့အလိုလို prepaid စနစ်ထဲကိုပေါင်းထဲ့မပေးပါဘူး။
ဖိုးထောင် says: ဖုန်းတစ်လုံးအတွက် သွင်းထားတဲ့ငွေတွေ သူတို့ ကွန်ပျူတာထဲမှာမရှိဘူးလား
Oo Oo says: မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌါန က ၀န်ကြီးနဲ့ ၀န်ထမ်းပညာရှင်တွေ ကို အထင်မသေးကြပါနဲ့ဗျာ..
ဦးဦးပါလေရာ says: ခေတ်အဆက်ဆက် ပြည်သူကို တိုက်ရိုက် အနှိပ်စက်ဆုံး ဒုက္ခအပေးဆုံးဝန်ကြီးဌာနတွေထဲမှာ
Mလုလင် says: Manual Paper Work ကို သာ ယုံကြည်တတ်တဲ့ အကျင့် ကျန်နေသေးတာ နဲ့ .. ကြည့်ရတာ သူတို့ Message စနစ် ကို သူတို့ မယုံ တာ နေမှာပါ … အဲဒါကလဲ ပို့ သာပို့သာ .. မရောက်တဲ့ အခါ မရောက်ဘူး နော့
pooch says: သိသလောက်ပြောရရင် prepaid card သုံးနေတာတောင် ဆက်သွယ်ရေးက လက်ကျန်ကို SMS နဲ့ လှမ်းတောင်းတာက ဒီလိုပါ။ သူတို့က လစဉ် ဘေလ်ထုတ်ပေးတာ နောက်ကျလေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ကိုယ်က ၅ သောင်းသွင်းထားတယ် ၄ လပိုင်းလောက်က ။ ၄ လပိုင်းမှာ သွင်းလိုက်တဲ့ ငွေက နောက်လာမဲ့ ၅ လပိုင်းအတွက် မဟုတ်သေးပါဘူး။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ လ ၃ လ ၄ လပိုင်းအတွက် ကျသင့်ငွေကို အရင်ဖြတ်ပါတယ်။ ကျန်တာကိုမှ နောက်လာမဲ့ ၅ လပိုင်းအတွက် ဖြတ်တာပါ။ အဲ့မှာ ပိုက်ဆံက အနှုတ်ပြနေရင် စာပို့ပြီး ဘယ်နေ့နောက် ဆုံးထားပြီး ဆောင်ပါ ဆိုပြီး လှမ်းတောင်းပါတယ်။ အဲ… ကိုယ်က ၆ လပိုင်းမှာ prepaid card သုံးနေတာတောင် လှမ်းတောင်းတယ်ဆိုတာကလည်း အဲ့လို ပြီးခဲ့တဲ့ လတွေမှာ ကြွေးကျန်နေလို့ပါ။ အဲ့လို ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ နည်းနည်းချင်းပဲ သွင်းလိုက်ပါ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကိုယ်သွင်းတာများလည်း prepaid card ထဲ မပေါင်းပေးလို့ပါ။ လစဉ်သူတို့ ဘေလ်ထုတ်တော့မှာ ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှဆိုပြီး သိတာမို့ မပိုအောင် လို့ပါ။ အဓိကပြသာနာက သူတို့ ဘေလ်ထုတ်နောက်ကျတာကြောင့်ပါ။ ပိုတဲ့ငွေကို နောက်မှ ပြန်ထုတ်ပေးမှာပါ။ ခုထိတော့ တခါမှ သွားမထုတ်ရသေးဘူး။ (ဘယ်လို အစီအစဉ်နဲ့ ထုတ်ပေးမယ် ဆိုတာ မသိပေမဲ့ ထုတ်ပေးမယ် ဆိုတာကတော့ သူတို့ ပြောလိုက်တာပါ) ဒါတွေ အားလုံး ကိုယ်တိုင် မသွားပဲ အားတဲ့လူလွှတ်ပြီး လုပ်ခိုင်းလည်း ရပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ မရှင်းမရှင်းတွေ ဖြစ်ကုန်တာပါ။ ( ကိုယ်တိုင် ၂ ခါလောက်သွားခဲ့ပြီးမှ သိခဲ့တာပါ) FEC နဲ့ ဗမာငွေ ခွဲထားတာကလည်း အလွန်ရှုပ်ပါတယ်။ တခါထဲ ပြီးရမဲ့ ကိစ္စကို မရှုပ်ရှုပ်အောင် လုပ်ထားတာကလည်း currency change ကို သေချာမကိုင်တွယ်နိုင်သေးလို့လည်း ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ( အထင်ပါ – ခရက်ဒစ်တူ ဘပု) အင်တာနက်ကို တန်းစီပြီး တသောင်းပေးမှ ထုတ်ပေးတာက သူတို့ ငတ်လို့ မ၀သေးလို့ပါ။
လာမဲ့ ၂၀၁၅ အတွက် e-government , paperless , Internet shopping ဆိုတာ မသိချင်လို့ မရတဲ့ခေတ်ကို ရောက်လာတော့မှာ။ ပုဂ္ဂလိက အားလုံး ၀င်လာရင် ဆက်သွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနဆိုတာ ပျောက်သွားရမဲ့ အရာတခုပါ။
ရနိုင်သလောက် မသေခင် ရိက္ခာကဲ့နေတာပါ။ လွယ်တာကို ခက်အောင်လုပ်မှ သူတို့ စားရတာမို့ပါ။ စကားမစပ် အဘရေ အာရှရဲ့ ကိုဆိုဗိုဆိုတဲ့ ပိုစ့်ကို သဘောကျပါတယ်။ ဘာမှ မဆိုင်သော်ငြား ဒီမှာ ၀င်ပြီး ပြောပါရစေ။
သန်းထွဋ်ဦး says: အဘဖောရေ. ဆက်သွယ်ရေးကတော့ဗျာ ပြောကိုမပြောချင်တော့ပါဘူး။
Foreign Resident says: pooch says:
pazflor says: DMA က ၀န်ထမ်းတွေကို ရော အဲ့လို ဆုံးမဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူးလား အဘ….:D
Foreign Resident says: pazflor ကလည်း ။
Comments By Postဘုံဆိုင်အတွင်းမှ မှတ်သားဖွယ်ရာ - cobra - cobraမွေးနေ့ နှင့် ကျမ အမှတ်တရ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - BMTM Mdyပုညကြိယာဆယ်ပါး - အရီးခင်လတ်“၀လုံးရေးဖို့ ညီလေးထိုင်” - အရီးခင်လတ် - မောင် ပေခရီးသည်လေးသို့ - လင်းဇော် ထက် - အရီးခင်လတ်မန်းဂဇက် ကဗျာချစ်သူများ၏ ကဗျာပြခန်း (ပြခန်းအမှတ် တစ်) - အရီးခင်လတ် - စနေအယ်ဒီတာ့သင်ပုန်း ( မေ ၂၀၁၃) - မောင် ပေ - pazflorဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့တွက် ဗုဒ္ဓနေ့ လက်ဆောင် - အရီးခင်လတ် - အရီးခင်လတ်ဖတ်ရွေး ရဲ့ CHANGE (Step 1.0) - အရီးခင်လတ် - မင်းမင်းစည်တော်ကြီး - မောင် ပေစိတ်ကူးတည့်ရာ လက်တဲ့စမ်း အာတီဒုံရဲ့ ဃနာနို့ဆွမ်း - မောင် ပေ - Mr. MarGaစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး ) - kai - ကြက်အူလှည့်၎ လရှည်ကြာ ရွာထဲမှာ - TNA - Ko chogyiSakura Tower5ထပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့ J-SAT အမည်၇ ဂျပန်ကုမ္ပဏီ - TNA - ကြက်အူလှည့်ဒါရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဲ့လား? - TNA - naywoon niအတု - naywoon ni - KyawTheinသန့်ချင်ယောင်ဆောင်ထားတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ အကြောင်း - naywoon ni - အလင်း ဆက်``အဖေမေးတော့ ဖြေခဲ့တယ်´´ - ရာမည - Foreign Residentလုမ္ဗိနီ သာမော အင်ကြင်းတောသို့..... - KZ - မောင် ပေစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၄ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး - ၂ ) - KZ - ရာမညနေသာသောနေ့တစ်နေ့ ဖြစ်လိုက်ချင်သည် အပိုင်း (၁၅) - မင်းမင်း - KZအမျိုး ဘာသာ သာသနာကို စောင့်ရှောက်ကြမယ် ဆိုရင် ဖြင့် - KZ - lele kyiရွာသူ/သားများ အတွက် - KZ - မဟာရာဇာ အံစာတုံး“ရှေးရှေးက ဆင်ဖြူရှင်မနန်းမတော်မိဘုရားခေါင်ကြီးကောင်းမှူ့ အခုမှာတော့ကျောင်းအိုအို” - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay“သဘာဝအလွမ်းမင်းသားကြီး (ဦးကြင်ဥ)” ရှေးကဗျာများပြန်လည်ကူးယူဖ်ာထုတ်ခြင်း အမှတ် (၈) - မဟာရာဇာ အံစာတုံး - ko pauk mandalay``ရွာထဲမှာ ဆုံကြတာပေါ့´´ - cobra - ခင် ခEast West Dental	PACE	Western Union	Category	Arts & Humanities
Top 10Yin Nyine Nway (77895 Kyats )intro (76971 Kyats )SP (70581 Kyats )naywoonni (67475 Kyats )zaylay (67079 Kyats )weiwei (66922 Kyats )cobra (62237 Kyats )fatty (61354 Kyats )Anzartone (59225 Kyats )MaMa (58007 Kyats )Top Posts & Pagesစဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၅၃ ) ( ဆော်ထည့်လိုက်စမ်းပါ ၊ ဘာသာရေး )